Home > Chemical Additive
Anping Tenglu သတ္တုဝါယာကြိုးကွက် Co.LTD သံမဏိလုံခြုံရေး mesh အရည်အသွေး: တွေ့ဆုံသြစတြေးလျ Market က။ လက်မနှုန်း mesh: 11mesh x ကို 11mesh ဝါယာကြိုးအချင်း: 0.8mm က Surface ကုသမှု: Black ကအမှုန့် coated, Grey ကအမှုန့်သံမဏိလုံခြုံရေးဖန်သားပြင်အိမ်ခြံမြေ coated: 1. တူညီသောအခွင့်အရေး Equal ဆန့သံမဏိဝါယာကြိုး, Equal ဝါယာကြိုးအချင်း။ 2. တူညီသောအခွင့်အရေး Equal အပေါက်အရွယ်အစား 3. ပြားနှင့်ဖြောင့်မျက်နှာပြင် 4. တွေ့ဆုံသြစတြေးလျစံ, Pass ကိုဓါးစမ်းသပ်မှုသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှု, Jemmy တိုက်ခိုက်စမ်းသပ် Pack: 1 သစ်သားအမှု၌ပိုး 25 သို့မဟုတ် 50 စာရွက်များ။ Sepecial ထုပ်ပိုးလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ စံ panel ကိုအရွယ်အစား: 750mm x ကို 2000mm (2400mm) 900mm x ကို 2000mm (2400mm) 100mm x ကို 2000mm (2400mm) 1200mm x ကို 2000mm (2400mm) မက်စ်ရဲ့ width: 1.5 လျှောက်လွှာ: လုံခြုံရေး (လုံခြုံ) ဝင်းဒိုးကိုဖန်သားပြင်, လုံခြုံရေး (လုံခြုံ) တံခါးကိုဖန်သားပြင်။ Sepecifications: လက်မနှုန်းပစ္စည်း mesh ကြေးနန်း DIA MM / လက်မပွင့်လင်း (မီလီမီတာ) ကိုဖွင့်ဧရိယာ% စျေးဧရိယာအက်စ်အက်စ် 316 သို့မဟုတ် 304 10 x 10 0.9mm /0.035 "1,64 41,7 သြစတြေးလျအမေရိကဥရောပအက်စ်အက်စ် 316 သို့မဟုတ် 304 10 x 10 1.2mm /0.028" 1.34 27,8 အက်စ်အက်စ် 316 သို့မဟုတ် 304 10 x 10 0.8mm / 0,032 "1,74 46,9 အက်စ်အက်စ် 316 သို့မဟုတ် 304 10 x 10 1.15mm / 0,045 '1.39 29.9 အက်စ်အက်စ် 316 or304 11 x ကို 11 0.8mm /0.032" 1.5 42.5 အက်စ်အက်စ် 316 သို့မဟုတ် 304 11 x ကို 11 0.7 မီလီမီတာ / 0,027 "1.6 48.3 အက်စ်အက်စ် 316 သို့မဟုတ် 304 12 x ကို 12 0.7mm / 0,027 '1.42 44.8 အက်စ်အက်စ် 316 သို့မဟုတ် 304 12 x ကို 12 0.58mm / 0,023" 1,54 52,8 အထူးကွက်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်
ဆိုဒီယမ် gluconate ရောင်းချ
ဖန်၏အေးဂျင့်သန့်ရှင်းရေး, retardar, အေးဂျင့်ကိုလျှော့ချရေအဖြစ်အသုံးပြု
ဆိုဒီယမ် naphthalene sulphonate Formaldehyde ရောင်းချ
အေးဂျင့်, စူပါပလတ်စတစ်, ဆောက်လုပ်ရေးလယ်ပြင်၌အေးဂျင့်ကိုလျှော့ချမြင့်မားသောအကွာအဝေးရေ, ကွန်ကရစ် admixtures မီးသေနတ်များအဖြစ်တပတ်ရစ်
ဆိုဒီယမ် lignosulphonate ရောင်းချ
ဆိုဒီယမ် Lignosulphonate (lignosulfonate) ရေလျှော့ချရေလျှော့ချထို့အပြင်ကွန်ကရစ်အရောအနှောအဘို့အအဓိကအားဖြစ်ကြသည်။ အနိမျ့သောက်သုံးသော, အနိမ့်လေကြောင်းအကြောင်းအရာ, ရေလျှော့ချမှုနှုန်းမြင့်မားသည်, ဘိလပ်မြေအများစုကြင်နာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ အဆိုပါဆိုဒီယမ် lignosulphonate ကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့် Naphthalin-Group မှ High-အသုံးရေလျှော့နေဖြင့်ဆိုဒီယမ် Lignosulphonate များအတွက်လျောက်ပတ်သည်သောအရက်များထို့အပြင်အတွက်နီးပါးမျှမိုးရွာသွန်းမှုထုတ်ကုန်စသည်တို့ကိုအကူအညီအထောက်အပံ့များကိုချပေး, ကွန်ကရစ်နှောင့်နှေး, ကွန်ကရစ်အစောပိုင်း-အသက်အရွယ်အစှမျးသတ်တိ Enhancer အဖြစ်အင်တိဖရိစ်ဓါတ် confected နိုင်သလား စသည်တို့ကိုအဆောက်အဦစီမံကိန်းရေကာတာစီမံကိန်း thruway စီမံကိန်းအတွက်လျှောက်ထား
ကယ်လစီယမ် lignosulphonate ရောင်းချ
စသည်တို့ကိုဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကွန်ကရစ် admixture, ကြွေထို့အပြင်, ဓာတ်မြေသြဇာများပိုထ, ဆန့်ကျင်ဘက်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့
ဋ humate ရောင်းချ
အာဟာရနှင့် humic အကူအညီပေါင်းစပ်ပြီးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ကောင်းစွာ-မျှတတဲ့အစာအာဟာရကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်အာဟာရစုပ်ယူသုံးစွဲမှုEnhancing။ , မြေဆီလွှာ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာImprovingမြေဆီလွှာ၏ကြားခံအမှုန့်တိုးပွားလာ, အပင်များက NP K သည်စုပ်ယူမှုပိုကောင်းအောင်။ , အက်ဆစ်နှင့် alkaline များမြေဆီလွှာများနှစ်ဦးစလုံးNeutralizingမြေဆီလွှာများ၏ PH ကိုတနျဖိုးကိုထိန်းညှိ, alkaline များနှင့်အက်ဆစ်မြေဆီလွှာကိုReducingနိုက်ထရိတ်အတွက်ထင်ရှားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမြေအောက်ရေသို့ပေါက်ကြားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအအေး, မိုးခေါင်အဖြစ်ကောက်ပဲသီးနှံ၏ခံနိုင်ရည်Enhancingမြေအောက်ရေကိုကာကွယ်ရန်, ပိုးမွှား , ရောဂါနှင့်ဖြုတ်ချခုခံကျန်းမာသန်စွမ်း, ပိုမိုအားကောင်းစက်ရုံများPromotingနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်Petroleumတူးဖော်ခြင်းအရည်လျော့ကျလာခြင်းနှင့် filtering ကိုအေးဂျင့်Boilerဆန့်ကျင်စကေးအေးဂျင့်နှင့်ရေအရည်အသွေးကို stabilizer Cementingအေးဂျင့်သာယာလှပနိုက်ထရိုဂျင်Stabilizingနှင့် (ယူရီးယားနှင့်အတူထို့အပြင်ကဲ့သို့) နိုက်ထရိုဂျင်ထိရောက်မှုတိုးတက်အောင် pulverized ရေဆိုးDispersingအေးဂျင့်ကနေအဆိပ်သင့်သတ္တုနှင့်၎င်းတို့၏အိုင်းယွန်းRemovingနှင့်အမဲဆီ၏သဲလွန်စပမာဏ၏ဖယ်ရှားရေးနိုင်ရန်အတွက်အကူအညီပေးရန်အေးဂျင့် deflocculating ပုံဖော်ကျောက်မီးသွေး, ရေနံ, အရည်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကိစ္စဆိုင်းငံ့
【ရာထူးအမည်】 1.It, မြေဆီလွှာစုစုပေါင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာတိုးတက်ကောင်းမွန်အမြစ်လှုပ်ရှားမှုတိုးတက်အောင်နှင့်အမြစ်များစနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးမြှင့်တစ်ဦးကွဲပြား function ကိုရှိသည်, အရွယ်မတိုင်မီအိုမင်းတားဆီးနိုင်ပါတယ်။ 2.It Anti-မိုးခေါင်ရေရှားခြင်း, Anti-တည်းခိုခန်းများ၏စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေလျက်, စဉ်ဆက်မပြတ် crooping တားဆီး, ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်မှုကိုတှနျးလှနျနိုငျသညျ။ 3.It သည့်မြေဆီလွှာများအနေဖြင့်အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ, ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကိုစုပ်ယူပြီးရှုပ်ထွေး။ 【 Pack, သိုလှောင်မှု & သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး】 1, Pack: 25kg / အိတ် 2, သိုလှောင်မှု: မိုဃ်းကိုရွာစေခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကိုရသောအခါသိုလှောင်မှုထဲကနေတားဆီးခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် ventilating အရပ်ဌာန၌စောင့်ဘဲ, agglomerated သည်မှန်လျှင်, နှိပ်စက်ခြင်းနှင့်အောင်ကဖြေရှင်းချက်သို့နှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတူညီသောဖြစ်လိမ့်မည်ပါ။
ပိုတက်စီယမ် humate / humic အက်ဆစ် / fulvic အက်ဆစ်
1 - 10 Total 13 (2 pages)
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း| ဆုပေးပွဲ| ကြှနျုပျတို့ကိုမှ Link ကို| ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ| တရုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်| မိတ်ဖက်| ဆိုက်ကိုမြေပုံ| Copyright (c) 2000-2021 GlobalTextiles.Com Corporation